Fitaovana tariby herinaratra, tapaka famafana, Glass Insulator- Yongguang
Fitaovana tsipika ambony
Insulator Ary Cutout Fuse
MISAOTRA NY ZAVATRA INDRINDRA
Jereo bebe kokoa ny vokatra >
Famaritana: Ny tsenan-tsolika avoakanay amin'ny karazan-jotra rehetra dia ampiasaina amin'ny fanamboarana tariby, ary ireo tsanganana herinaratra amin'ny lalamby sy andalana fandefasana herinaratra. Ny fijanonana mijanona miaraka amin'ny tanjaka avo, ny rafitra matevina ary ny fampisehoana tsara. Ny tehinay dia mijanona amin'ny hafanana izay manome ny fitoviana amin'ny endriny. Mihetsiketsika tsara izy io ary mahavita miantraika tsara ny mari-pana sy ny tsindry. Ny tehinay mijanona dia manana karazan-dàlana roa lehibe, izay karazana tsipìka sy karazana fantsona. Ho avy ny karazana tsorakazo tsirairay ...
Matokia anay, safidio izahay
HEBEI YONGGUANG LINE EQUIPMENT CO., LTD. dia orinasa teknolojia avo lenta manokana amin'ny famokarana, R&D ary varotra. Ny toerana misy an'i Yongguang dia ao amin'ny "Renivohitra herinaratra" malaza ao Shina-Yongnian, akaikin'ny lalana 107 an'ny lalana, seranam-piaramanidina Handan ary ny gara.
Ny orinasa naorina tamin'ny 1995, dia mpamokatra matihanina amin'ny Fitaovana herinaratra herinaratra izahay, indrindra amin'ny fantsom-baravarana ambony sy fametahana famafazana, Composite Insulators, Arrester, Drop-Out Fuse Cutout, Fitaovana elektronika toy ny fifindrana herinaratra sy vokatra fitsinjarana. Ny orinasa dia mipetraka amin'ny faritany 8000m2, manana mpiasa 200 mahery, anisan'izany ny teknisianina 40 matihanina.
mamaky bebe kokoa >
Mandray anjara amin'ny hetsika fampirantiana
FAHENDRENA & TRANO FIVAROTANA
Noa Lyles: Zavatra dimy tokony ho fantatra momba ny World Champion Sprinter
Mikaroka "Noah Lyles" ao amin'ny Spotify hahitanao mozika miresaka momba ny mozika be dia be momba ny Amerikanina ary ho tonga foana ianao. Nandalo an'i Nojo18 izy rehefa tonga tamin'ny sehatry ny mpanakanto mirakitra azy (sy ny fitantanana ny Instagram), iray amin'ireo toetra mampiavaka ny tompon-daka maneran-tany 200m mpanjaka. Raha Lyl ...
Ny tsenan'ny tsenan'ny U-Bolts manerantany, ny fahafaha-manao, ny mpamily, ny fanamby ary ny fanadihadian'ny tafika dimy an'ny Porter
Ny U-bolt dia bolt iray amin'ny endriny ny litera U miaraka amina kofehy amin'ny sisiny roa. Ny U-bolts no nampiasaina voalohany hanohanana ny paipa, ny sodina izay mandalo ny tsiranoka sy ny gazy. Ny tsena U-Bolts manerantany dia tombanana amin'ny xx tapitrisa dolara amerikana tamin'ny 2020 dia antenaina ho mahatratra xx tapitrisa dolara amerikana amin'ny faran'ny taona 2026, ...
Ny tsenan'ny mpanasa struktural amin'ny alàlan'ny fironana farany, mitaky sy tombontsoan'ny raharaham-barotra betsaka 2020 hatramin'ny 2026: Hobson Engineering, Ketan Engineering Co, Cal-Fasteners, Inc
Ny tatitry ny tsenan'i Structural Washers dia manome loharano sarobidin'ny manan-danja ho an'ny paikady momba ny mpandraharaha sy ny famakafakana fifaninanana amin'ny Structural Washers Market. Manome ny fijerin'ny indostrian'ny Oxygenated Solvents amin'ny famakafakana ny fitomboana sy ny vidin'ny futuristic, ny vola ary ny lafiny maro hafa. Ery...
Vaovao momba ny fandalinana: ny volan'ny tsena arrester avo be, ny fironana farany, ny fitomboana ary ny fizarana 2020 hatramin'ny 2025: ABB, Siemens, Eaton Corporation
Chicago, Etazonia: - Ny tatitra dia mivoaka ho toy ny fitaovana fanombanana manan-tsaina sy fandinihana lalina ary koa loharanom-pahalalana lehibe hanampy anao amin'ny fahazoana hery ambony ao amin'ny tsenan'ny High Voltage Surge Arrester. Tafiditra ao ny fanadihadian'ny Vondron-tafika dimy sy PESTLE dimy an'ny Porter mba hampitaovana ny busin-nao ...
Tsenan'ny U-Bolts 2020 Miaraka amin'ny famakafakana fiantraikan'ny COVID-19 sy ny tombontsoa amin'ny sehatra 2026
Ny tsenan'i U-Bolts vao haingana dia namoaka ny fandalinana fikarohana momba ny tsena Global Market miaraka amin'ny birao fampahalalam-baovao maherin'ny 100 ary miparitaka amin'ny pejy ary mora azo amin'ny antsipirihany TOC amin'ny tsenam-barotra "U-Bolts". Ny tatitra dia manome fampahalalana sy fampahalalana an-tserasera fandrosoana eo amin'ny sehatry ny sehatra ho ...
Tao amin'ny Junction of Shahe and Dongguajing Village, Liuying County, Yongnian District, Hadan City, Hebei Province, China
Vokatra nasongadina - Sitemap - Site finday